Soosaarayaasha & Alaableyda Dareenka Leh ee Graphite | Shiinaha Graphite Warshad Dareen adag
Maaddada adag ee kaarboon isku dhafan ayaa la dareemay (Waxsoosaar daahir ah oo sarreeya)
Waxyaabaha adag ee kaarboon kaarboon ee la dareemay waxaa lagu farsameeyaa tiknoolajiyad gaar ah oo lagu adkeeyo laguna dejiyaa, iyo daaweynta isdaahirinta heerkulka sare ee sare leh foornada graphite, polyacrylonitrile kaarboonka la dareemo iyo dharka kaarboon salka ah ee polyacrylonitrile. Caabbinta ablative, caabbinta shoogga kuleylka, iska caabbinta hawada, bandhigyada kuleylka kuleylka ayaa aad u wanaagsan, sidaa darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa foornooyinka warshadaha faaruqinta ah (foornada gaaska damisa gaaska ee cadaadiska saareysa, foornada cadaadinta hooseysa ee foornada, foornada cadaadiska faaruqinta ah).
Dhululubo adag oo la dareemay si loo ilaaliyo kuleylka
Warshadaha sawir-qaadista, alaabada garaafka qaaska ah ee loo isticmaalo wax-soo-saarka polysilicon waxaa ka mid ah: reaktor, kaararka polycrystalline, qeybiyeyaasha gaaska, walxaha kuleylka, gaashaammada kuleylka iyo tuubooyinka ilaalinta kuleylka. Foornada yaraynta Siemens iyo foornada hayd hydrogenation ee STC-TCS ee dib u soo kabashada gaaska geedi socodka, guud ahaan waxaa jira 1000 ° C (1800 ° f) heerkul sare iyo jawiga sare ee daxalka. Qaybaha garaafkeennu waxay si gaar ah ugu habboon yihiin codsigan sababtoo ah kuleylkooda sarreeya iyo iska caabbinta daxalka.
Warshadaha sawir-qaadista, alaabada garaafka qaaska ah ee loo isticmaalo wax-soo-saarka polysilicon waxaa ka mid ah: reaktor, kaararka polycrystalline, qeybiyeyaasha gaaska, walxaha kuleylka, gaashaammada kuleylka iyo tuubooyinka ilaalinta kuleylka.